buug-yaraha fiidiyowga, muuqaalka sawirka dhijitaalka ah, kalandarka dhijitaalka ah - VideosBrochure
AQOONSIGA SOO SAARKA SUUQA.
Fikradaha fiican waxay kicinayaan xiisaha Suuqa. buuga yar yar ee fiidiyowga ku Gaadho Macaamiishaada Habka Hal Abuurka leh iyo Ka Qaybgalka. Buug yar oo muuqaal ah U soo qaadashada baahidaada daabacaadda nolosha oo leh cod iyo aragti aragti filim leh! Adeegyada loo yaqaan 'bespoke' ee loogu talagalay hal-abuurka, suuqleyda, iyo madbacadaha. cabirkeedu waa kala duwan yahay, iyadoo shaashadda ugu yar la barbar dhigi karo taleefanka casriga ah kan ugu weynna loo isticmaalo aaladda kiniinka ama IPad
Alaabtayada ugu weyn oo ay ku jiraan buug-yaraha fiidiyowga iyo muuqaalka sawir dhijitaalka ah. Moodooyinka buug-yaraha fiidiyowga oo ay ku jiraan kaarka ganacsiga fiidiyowga, iyo gelinta majaladda, cabirka laga bilaabo 2.4inch ilaa 10inch.
MAGAALADA DIGITAL PHOTO
HAYSTA AAN AADAN AHAYN
Gawaarida Mercedes Benz Car Video Bro ...
Colgate Invita Ganacsi Cusub ...
IDW Xayeysiinta BMW Car ver ...
IDW xayeysiiska maqaarka la qaadan karo ...
Ciid wanaagsan Christmas
12.5inch WiFi Digital Cloud ...
Dijital Cloud Album 10.1 In ...
Kululey 15 inch nidaamka Android ...
10.1 inch full HD IPS taabashada ...
Auto 360 wareeg wareegto obje ...
Soogalootiga cusub aiqoraa ...
smart Ai haysta
jir sawir digital
dahabka sanduuqa fiidiyowga
kaarka ganacsiga ee fiidiyowga
Hadda waxaan nahay soosaarka ugu sarreeya Shiinaha ee buug-yaraha fiidiyowga / buugga fiidiyowga / baakadka fiidiyaha ... iwm
aaga ganacsiga ugu weyn waxaan diirada saareynaa US, Europe (Germany, UK, France, Italy Main), Middle-bariga (sida UAE, Saudi Arabia iyo Qatar), AU.
Shaqaalaheennu waxay soo saarayeen buug-yare fiidiyoow ah muddo 9 sano ah injineerkeenuna wuxuu khabiir ku yahay buug-yaraha fiidiyowga / muuqaalka sawir dhijitaalka ah / sheyga elektaroonigga ah.
Mar-18-2021 Farsamada Buug-yaraha Farsamada
Mar-18-2021 Tilmaamaha Naqshadaynta LCD Video Buug-yaraha
Mar-08-2021 Fiidiyowga kujira Buug-yaraha - Qalabka Cajaa'ibka leh ee Suuqgeynta Degdegga ah Ma waxaad raadineysaa aalad suuqgeyn ku habboon oo isku dhafan fiidiyow iyo daabac si aad ganacsigaaga si deg deg ah ugu suuq geyso?
Mar-08-2021 Buug-yaraha fiidiyowgu wuxuu adduunka u horseedaa jiilkii ugu dambeeyay ee warbaahinta suuqgeynta ah
Mar-08-2021 Sidee looga dhigi karaa macaamiisha inay ku bartaan buug-yaraha fiidiyowga qaab dhinac walba ah oo qoraal gaaban ah?
VideosBrochure (Idealway Tech Company) Istaag Shenzhen, oo ah xarun dhaqaale iyo siyaasadeed iyo dhaqan, oo ah magaalo qaabkeedu aad u urursan yahay isla markaana lagu cusbooneysiiyo xawaare sare, xarunta ugu weyn ee Shiinaha lagu qaybiyo elektaroniga, tan ugu muhiimsanna, aagga asalka ah ee buug-yaraha fiidiyowga. Waxaan ku leenahay faa iido gaar ah qalabka aruurinta iyo xakamaynta kharashka sidaa darteed waxaan u soo bandhigi karnaa macmiilka wax soo saar tayo sare leh qiimo tartan leh.